မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့ ဝင်များ တွေ့ ဆုံရန် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မမေ့လျော့စေရန် အရေးပေါ်သတိပေးကြေညာချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့ ဝင်များ တွေ့ ဆုံရန် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မမေ့လျော့စေရန် အရေးပေါ်သတိပေးကြေညာချက်
မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့ ဝင်များ တွေ့ ဆုံရန် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မမေ့လျော့စေရန် အရေးပေါ်သတိပေးကြေညာချက်
Posted by moonpoem on Jun 1, 2011 in Myanmar Gazette | 26 comments
မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့ ဝင်များတွေ့ ဆုံပွဲ
တွေ့ ဆုံပွဲ ရက်နီး နေပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် မမေ့လျော့စေရန် အောက်ပါအတိုင်းထပ်မံ
နေရာ …တော်ဝင်စင်တာပထမထပ်ရှိ Morning Starလက်ဘက်ရည်ဆိုင်
၀တ်ဆင်ရမည့် အ၀တ်အစား ….အဖြူရောင်အင်္ကျီ
MG မှဟုသိသာစေရန်အတွက် ထိုင်နေသော စားပွဲခုံပေါ်တွင် A4စာရွက်လိပ်တင်ထားပါမည်
09 7314 6782
တကယ်ကြီးတွေ့ကြတော့မှာလား ……………………..။ king ဆီကို ဖုံးဆက်မယ် အခု။
ဖုန်းဆက်တော့လည်း ဖုန်းမကိုင်ပါဘူး ….
မောင်ကင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး …. ဒယ်ဒီဖက်ကိုပြောတာ ။
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော်ဖုန်းမှာ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း …….
kingကျွန်မဆီ အီးမေးပို့ ထားတာ တွေ့ လို့ ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်ရှင့်။ မေးလ်စစ်လိုက်ပါဦး။
နိုင်ငံရေးမရေးတဲ့လူတွေနဲ့ …. လူသစ်တွေသွားလျှင်တော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်….။
ကျနော်ဖုံးဆက်တော့အလုပ်များနေလို့တဲ့ …. ဒါမှတရားမရ ဘယ်သွားရှာရပါ့ ….။
တကယ် အဟုတ် တွေ့ကြမယ်ဟုတ်… ဟုတ်လား….
လာတော့ မဖမ်းလောက်ပါဘူး..ဘာလို့ လဲဆိုတော့
MG က mmwikileaks မှ မဟုတ်တာပဲဟာကို :D
ဲပြီးတော့ Nick နဲ့ရုပ်နဲ့ လဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင် ခွဲခြား သိတာမှ မဟုတ်တာ
တခြား ဖိုရမ်တွေ၊၀ဘ်ဆိုဒ်တွေက နှစ်ပတ်လည်၊တွေ့ ဆုံပွဲ၊မိတ်ဆက်ပွဲ စသဖြင့် လုပ်နေကြတာပဲဟာ..
MG က member တွေက အကုန်လူကြီးသားတွေပဲဟာကို..ဘုမှ ဂရုစိုက်မနေနဲ့ 
လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ ကြ၊ဆုံကြ၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါ.။
ကျနော်တော့ မလာတော့ပါဘူး…မိန်းမ မလွှတ်လို့ ပါ
တစ်ခုခုထူးခြားရင် “ဖွ” ဖို့ အတွက် နိုးကြား တက်ကြွစွာ ရှိနေမှာပါ
အနော် လူသစ်လဲ လာရဲဘူး..။
အမှန်မှာတော့ moonpoem က တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စတင်အကြံပြုသူ ရှုံးလူနဲ့ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ နှစ်ခုကွဲသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ကုန်ပစ္စည်း၊ စာမူ မဟုတ်လို့ စပြောသူ မူပိုင်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပေမဲ့ မမြင်ရတဲ့ လိုက်နာကောင်းတဲ့ အကျင့်တခုဖြစ်လို့ပါ။ အားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးကြောင်ကြီးရယ်… တွေ့ဆုံချင်တဲ့သူတွေ အဓိက ပူးပေါင်းပြီး တိတိကျကျလုပ်သင့်တာပေါ့။ ခုဟာက မတွေ့ရင် ဈေးဝယ်ပြန်ရမလိုပုံစံတွေဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး ဦးဆောင်မယ့်သူမရှိသလိုဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူက တွေ့ချင်ပေမယ့် လာချင်ပါ့မလဲ။ တွေ့ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေ သေသေချာချာ ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်ရှင်။
လူဟောင်းတဦးဦးကို ဦးဆောင်ခိုင်း ..။ လူဟောင်းတွေက တချို့အပြင်မှာ တွေ့ဘူးတာလဲရှိတယ်
မတွေ့ဘူးတောင် .. တယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်းတယောက် အတော်လေးသိထားကြတယ် …..။
ပြိးတော့ kai ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဖိတ်စာပို့ … kai လဲ ဘယ်သူ ဘယ်လိုဆိုတာ အတော်သိတာပေါ့။
လေးဖက်ရေ… မုန့်ဝယ်ကျွေးရင် စားမယ်နော်။ အကျန်ပေးတာတော့ မစားချင်ဘူးရှင့်
ကဲကဲ အားလုံးနားထောင် ဒီလိုလုပ်ပါလား ဟိုလိုလုပ်ပါလား ငါလဲပြောတက်ဘူး….:D
တွေ့ဆုံပွဲလေးလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အမြဲလိုလို နက်ပေါ်မှာပဲ ရင်းနှီးပြောဆိုနေကြတယ် ခုလို လက်တွေ့တွေ့ဆုံတော့ ပိုလို့ရင်းနှီးခွင်ရတာပေါ့ ကျွန်တော်က အလှမ်းဝေးလွန်းလို့ပါ ..သဂျီး က တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပြီး မဖမ်းချူပ်ပါဘူး ဟီး… ဟုတ်တယ်မလား ပျော်ရွှင်စွာ တွေ့ဆုံပွဲလေး ပြီးဆုံးပါစေ။
နိုင်ငံရေးနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ ပို့စ်တွေတင်မိလို့ပါ..ကွန်မန့် တွေပေးမိလို့ပါတဲ့ 
ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ဒီလိုပို့စ်တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ MG ကမှာတင် တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုရှူံးလူ က တွေ့ ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်ချင်ပါတယ်လို့ ရေးထားပေမယ့် ဘယ်သူကမှ တိတိကျကျ မပြောကြပါဘူး။
အဲဒီ အတွက် ကျွန်မက အခုလို ပိုစ့်တင်ပြီး ပြောလိုက်တာပါ ။ တွေ့ ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်စေချင်လို့ ပါ။
ကျွန်မလွန်တယ် ထင်ရင်လည်း တောင်းပန်ပါရစေ
ကိုရှုံးလူရေ။ တခြား အဖွဲ့ ဝင်တွေ လာတာမလာတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ ပြောထားပြီးသား
ကျွန်မကတိအတိုင်း တနင်္ဂနွေ နေ့ လည် ၁၁နာရီ ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေမှာပါ။ ၁၂နာရီထိုးတဲ့အချိန်ထိ စောင့်နေမှာပါ။
ဖြစ်နိုင်တယ်၊ MG က တခါမှ အဘမ်းမခံရသေးဘူး။
်သူလာလာ မလာလာ ကိုယ်ကစောင့်ရမှာ………………………………………
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှင်းတဲ့သူတွေ တွေ့ကြသင့်ပါတယ်။ ပျော်စရာလဲကောင်း အကျိုးလဲရှိမှာပါ။
ဒီရွာထဲမှာကို ရှိပြီးသား ဖြစ်လောက်ပါတယ်။
MG ဟာ အတော်ဂရုပြုမိတဲ့ဆိုက်တခုပါ။
ကျွန်တော်ကြားထားတာ တခုပြောရရင် “—” ထဲပါတဲ့ တယောက်ဆိုရင် အရင်က MG ရဲ့ပုံမှန်ပရိတ်သတ်ပါ။ member တောင်ဝင်ထားဘူးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲ – ရိုးရိုးသားသား ကြိုက်လို့ပါတဲ့။
အရင်က ဘာမှလုပ်မထား- နောင်လဲ ဘာမှလုပ်ဘို့ ရည်ရွယ်မထားရင် စိတ်ပူစရာမရှိပါ။
ရွာသားတွေဘယ်သူ..ဘယ်ဝါ..ဘယ်မှာနေတယ်.. (သိလည်း).. ဘယ်သူ့ကိုမှ ရှယ်မှာမဟုတ်ပါ..။
တချို့ ..ရွာသားဘယ်သူရဲ့ အီးမေးလ်လေး..ပေးပါ..ဘယ်မှာနေလည်းအိုင်ပီလိပ်စာပြောပါလုပ်လာလည်း.. ကျုပ်အနေနဲ့.. (ကာယကံရှင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲ) ပြန်စာပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျား.။
ပထမအကြိမ်မို့ … ဒီတွေ့ပွဲလေးတော့ ဖြစ်သွားစေချင်ပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်..အမျိုးသမီးဖက်ကတယောက်…အမျိုးသားဖက်က တယောက်က..ခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး.. လာမဲ့သူတွေကို.. ကြိုတင်အချိပ်အဆက်ယူသင့်ပါတယ်..။
ပြီးမှ… ပါ့ဗလစ်လုပ်ထားတဲ့.. နေရာမဟုတ်ပဲ..ပြင်ချိန်း.( နေရာပြောင်း ) စားကြသောက်ကြ လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တာပါပဲ..။
နေရာကို ပါ့ဗလစ်လုပ်ထားတော့… မတော်..တယောက်ယောက်က.. မသိမသာနဲ့ လာချောင်းပြီ..ဂျာနယ်ထဲ ဓါတ်ပုံထည့်နေရင်မခက်လား..။ ပရိုက်ဗေစီဘယ်ရှိတော့မလဲ..။
အဲဒီတော့.. ယူအက်စ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေအမိမြေအပြန် ..နယ်ခံတွေနဲ့..မိတ်ဆွေဖြစ်တွေ့ကြဆုံကြနိုင်ဖို့လည်း မျှော်လင့်မိတာပါပဲ..။
ဥပမာ.. ကိုရင်ကြောင်ကြိးပြန်လာရင်..ကြောင်သားဟင်းဝိုင်းဖွဲ့ ချက်စားကြ..။ ကိုရင်အောင်ပုပြန်လာရင်… ထန်းရည်တူတူသောက်ကြ ဆိုတာမျိူးပေါ့..။
ကိုရင်ကြောင်ကြိးပြန်လာရင်..ကြောင်သားဟင်းဝိုင်းဖွဲ့ ချက်စားကြ ဆိုတော့ကာ ခုကတည်းက သဂျီးလို သေနတ်ကိုင်ပြီး စောင့်ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဓားမြှောင်ပဲဖွက်ပြီး ဆောင်သွားရမလား။ ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေ စုပြီး လေ့ကျင့်ထားမှ ထင်တယ်။
မန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲဆိုတာက ဘယ်မှာတွေ့တွေ့ တွေ့နေကြတာပါပဲ။ မနောတို့ ဒီပြင်ဖိုရမ်တွေဆို စုပြီး နာရေးကူညီမှုမှာလှူတာတွေ၊ အဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်လုပ်တာတွေလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ပျော်ဖို့လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပရဟိတတွေစုပေါင်းလုပ်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစုတဝေးတွေ့ကြတော့လည်း ကောင်းတာပေါ့ရှင်…..
ဦးဖက်တီး … ဖုန်းဆက်တာလား .. ဖုံးပြီး ဆက်တာလားဟင်